Egwuregwu kacha mma Final Fantasy maka gam akporo | Gam akporosis
Otu n'ime aha egwuregwu kachasị ewu ewu na akụkọ ntolite bụ, n'enweghị obi abụọ, usoro Final Fantasy. Kemgbe XNUMXs, ọtụtụ egwuregwu n'okpuru Final Fantasy nche anwụ eruola consoles na kọmputa na mbụ, na smartphones na mbadamba mgbe e mesịrị. Ma n'ezie, taa panorama na-agbaso otu ụda ahụ.
Dị ka anyị kwurula, ọtụtụ egwuregwu na Final Fantasy aha dị ugbu a. maka ngwaọrụ mkpanaka Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye ofufe nke saga a ma ọ bụ naanị, ị na-abanye n'egwuregwu a, taa anyị ga-egosi gị ụfọdụ nke kachasị mma ka ị nwee ike nwee ọ toụ zuru oke n'oge ụbọchị mmiri a.
1 Final Fantasy Nwere Obi Ike Exvius
3 Onye na -edebe ihe ndekọ Fantasy ikpeazụ
4 Ikpeazụ Fantasy Akụkụ
Final Fantasy Nwere Obi Ike Exvius
Anyị malitere nhọpụta anyị na aha «Final Fantasy Brave Exvius», nke bụ otu n'ime egwuregwu ndị a kacha ewu ewu na ekwentị mkpanaaka na usoro Final Fantasy. Akụkọ a metụtara ndị dike abụọ na-anwa ịchekwa kristal na ọhụụ ha zoro n'ime. Can nwere ike kpọghee ihe odide dị iche iche site na egwuregwu ndị ọzọ na saga iji nyere gị aka na ọchụchọ ahụ.
Egwuregwu atụmatụ ọtụtụ nsogbu, agha, kenkwucha nkà, kpokọtara mmegharị, ihe omume, dungeons na obodo na ị ga-inyocha chọta ihe na-ezo ụzọ ga-enyere gị aka iru gị ọzọ ebe na ọtụtụ ndị ọzọ. A na-ekesa ya n'okpuru modality freemium yabụ ị kwesịrị ịzụrụ ihe ịzụrụ n'ime ngwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ imeziwanye ahụmịhe egwuregwu gị.
"Mobius Final Fantasy" na-bụ nnọọ aha pụrụ iche n'ime usoro a nke Final Fantasy egwuregwu. Ihe kpatara ya anaghị agbaso usoro ọgụ ụgbọ ala gboo ma ọ bụ ụdị akụkọ site na isi usoro ma ọ bụ egwuregwu ndị ọzọ freemium Final Fantasy. N'agbanyeghị nke a, ọ nwere ụfọdụ ụdị ihe ahụ. Akụkọ a gụnyere dike nke pụtara na ụwa etisara na ọrụ ya bụ ime ka dike idozi ihe niile. Egwuregwu, na ohere, dị oke oge a mana ka, ọ bụ otu n'ime ihe kacha mma.
Ọ nwere nnukwu Ihe eserese 3D, mkpọsa na ihe omume pụrụ iche, imirikiti nhọrọ nhazi, ọrụ na nka maka gị itinye ihe niile eji eme ihe na nnwale wee nweta mmeri na ndị ọzọ.
Dị ka nke gara aga, ọ bụ egwuregwu freemium nke gụnyere ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
MOBIUS EGO FANTASY
Onye na -edebe ihe ndekọ Fantasy ikpeazụ
Na «Final Fantasy Record Keeper» ị ga - enwe ike Mbanye odide si dị iche iche Final Fantasy egwuregwu. Ozugbo i mechara nke ahụ, ị ​​nwere ike mụta nwa nke egwuregwu kacha ochie. N'ezie, ị ga-eme nyocha akụkọ ihe mere eme ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijide n'aka na ihe niile mere dịka ha kwesiri.
Ọ bụ ihu ọma banyere gị inwe ike relive ọkacha mmasị gị Final Fantasy oge, ma ha na-ewetara gị mbụ aka. Kporie usoro ihe eji aga n'ihu na-aga n'ihu (BTC), mepụta otu nke gị ma duru ya n'ebube nke mmeri n'ọgụ.
Dị ka ndị ọzọ, ọ bụ egwuregwu freemium nke gụnyere ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Final efu Record nēdebe
Developer: Ụlọ ọrụ DeNA Corp.
Ikpeazụ Fantasy Akụkụ
Ọ bụrụ na anyị gafee n'oge gara aga, anyị ga-ahụ "Final Fantasy Dimensions", nke bụ otu n'ime egwuregwu mbụ n'usoro iji mee ihe maka ekwentị mkpanaaka. Dịka, ọ na-enye ọtụtụ ihe ndị nyere aka mee ka usoro izizi ahụ bụrụ nke ewu ewu, gụnyere sistemụ ọgụ na ogologo, akụkọ ogologo.
The ndịna-emeputa yiri nnọọ ndị ị pụrụ ịhụ na Final Fantasy IV na Final Fantasy V, ihe na-enweghị obi abụọ ọ ga-amasị ndị na-akwado nnukwu aha nke aha ochie. Na mgbakwunye, ọ na-adị ma na-egwuri egwu dị ka egwuregwu ndị okenye na isi usoro. Ọ dị oke ọnụ, ee. Mana ihu ọma ya anyị nwere ike ịsị na ọ nweghị mgbasa ozi yana ị gaghị ahụ ịzụrụ ihe ịtụnanya n'ime.
Ikpeazụ FANTASY DIMENSIONS
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu kacha mma Final Fantasy maka gam akporo
NOMU S10 Pro "enweghi ike ibibi ya" nke ere ya ụbọchị ole na ole